Inona no fotoana farafaharatsin'ny fanatsarana ny tranonkalan'ny tranonkala?
Ny aterineto dia mitombo hatrany sy mihatsara hatrany. Isaky ny andro dia mandefa fampahalalam-baovao isan-karazany ny olona amin'ny finday. Mba hahalalanao hoe inona ny votoaty mety mahasoa ny mpampiasa ary manavaka azy amin'ny spam, mila mitady fitaovana goavana tahaka an'i Google ny toetr'andro sy ny fanavaozana ny algorithmika tsy tapaka. Raha manao izany izy ireo, dia manome fahafahana ho an'ireo tompona tranokala sy ireo mpampiasa ny salanisa handray soa avy amin'ny data momba ny kalitao - 36 barstool. Ankoatra izany, ny fampahalalam-baovao algorithm dia mamela ny fitaovan'ny fikarohana mba hanasaziana ireo mpitsikilo sy ireo manam-pahaizana manokana SEO. Noho izany, ny mijanona ao amin'ny TOP OF SEO lalao, mila mahafantatra ny vaovao rehetra ao amin'ny sehatry ny fanadiovana fikarohana ao amin'ny tranonkala ianao ary manao fanatsarana mety amin'ny tranokalanao. Anatin'ity lahatsoratra ity dia hifanakalo hevitra momba ny fotoana voafaritra telo izay nanova ny natioran'ny SEO ary mahatonga ny manam-pahaizana SEO hanova ny fomba fitadiavana tranonkala.
Fiovana mahery vaika amin'ny fampivoarana ny tranonkalan'ny tranonkala
Tsara ny miteny fa nandritra ny folo taona lasa, ny algorithm vaovao farany dia nanova tanteraka ny fitsipiky ny fikarohana Optimization. Raha toa ireo mpihira an-tserasera sasany nianjera ny fialan-tsasatra tao amin'ny laharam-pametrahany taorian'ny fanampim-pikirak'i Google, dia nisy mpitsidika hafa nahita fahazoan-dalana nanatsara ny toerany tao amin'ny SERP. Androany dia hiresaka momba ireo fanavaozam-baovao telo mahery vaika izay nanova ny SEO androany.
Ny Google Florida Update
Ny fisian'ny Google voalohany voalohany dia natao tamin'ny Novambra 2003. Fantatra amin'ny vaovao momba an'i Google Florida. Io fanavaozana io no fiovana goavana indrindra amin'ny lalao Google tamin'ireny fotoana ireny. Ny tanjona voalohany momba ny fanavaozana an'i Florida dia ny hitifiran'ireo manam-pahaizana manokana momba ny SEO izay nanandrana nanamboatra ny lalao. Natao mba hisorohana ny teknolojia SEO mainty toy ny teny filamatra. Nipoitra ny teny hoe 'keyword stuffing' nanomboka tamin'ny andro voalohan'ny fampivoarana ny famatsiam-bola. Teknika manelingelina izay mamela ireo webmasters hanamboatra ny lalao fikarohana. Izany dia dingana amin'ny fampidirana teny fanalahidy manokana na fametrahana fehezanteny manan-danja. Amin'ny ankapobeny, ireo teny fikarohana ireo dia tsy manan-danja amin'ny votoatiny ary natao manokana ho an'ny fikarohana, fa tsy amin'ny mpampiasa. Ireo fehezan-teny ireo dia azo averina amin'ny alàlan'ny lahatsoratra ka matetika dia toa tsy mahazatra izy io. Noho izany, mba hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny rafitry ny fikarohana, Google dia nanapa-kevitra ny hanasazy ireo tranonkala ahafahana mijery ny teny fanalahidy. Taorian'ity fanavaozana ity, tranonkala maro no very traikefa ary nijaly be. Naka fotoana sy ezaka maro ho an'ny tompon'ny tranonkala ny famerenana ny lazany ho loharanom-baovao. Na dia izany aza dia lesona tsara ho an'ireo izay miezaka ny manitsakitsaka ny toro-làlana voalazan'ny fitsipika.
Ny fampisehoana Google Panda
Ny faharoa amin'ny alàlan'ny habeny sy ny fiantraikany amin'ny tontolo nomerika dia ny fampisehoana Google Panda. Natomboka tamin'ny Febroary 2011 izany. Ny tanjon'ity sivana ity dia ny hanesorana ireo vohikala manana votoaty tsy dia tsara loatra amin'ny fanatanterahana ny valin'ny fikarohana ao amin'ny Google. Raha te hanao izany dia te-hamerina ny tranokala avo lenta sy manan-danja eo akaikin'ny TOP SERP ny Google ary hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa mandritra ny fikarohana. Io fanavaozana io dia nahangona hatramin'ny 12% amin'ny valin'ny fikarohana. Ny tranonkala lehibe indrindra amin'ny aterineto misy fifamoivoizana tsy tapaka dia very 50% ny mpitsidika noho ny fiakaran'ny SERP. Ity tranonkala Google ity ihany no manimba ireo vohikala izay manana votoatim-pahaizana ambany. Ho an'ny sehatra hafa dia tsy niova tanteraka ny toe-draharaha. Google dia nanazava fa ny hatsaratsara kokoa sy ny votoatiny mifanentana indrindra dia hahazo valisoa ambony indrindra, raha toa kosa ny sanda latsaky ny latsaky ny latsa-paka dia hatsaraina. Panda dia nifantoka indrindra tamin'ireo tranonkala misy vontoaty malefaka. Ity sivana ity dia fomba tsara ho an'ny Google mba hikolokolo ny toeram-pambolena ao anaty aterineto raha toa ka lasa resaka goavana amin'ny valin'ny fikarohana miaraka amin'ny votoatiny tsy manan-danja tsy dia manan-danja izay nirotsaka ho laharana noho ny habetsaham-be marobe. Ireo mpitsoa-ponenana lehibe ao amin'ny fitsipika dia tsy tafaverina amin'ity sivana Google ity mandraka ity daty ity. Amin'izao fotoana izao, Google dia mamelatra ny Panda ho isan'ny iray amin'ireo algorithm fototra. Izy io dia ampahany amin'ny fanavaozana mihodina mihodinkodina, volana maharitra iray isan-taona. Vokatr'izany, nanjary sarotra ny nahalala raha misy tranonkala iray mijaly noho ny panda vaovao na tsia.
Google Penguin fanavaozana
Ny algorithma novokarin'ny Google Penguin tamin'ny Aprily 2012. Algorithm amin'ny tranonkalan'ny tranonkala izay manasazy ny olona tsy manaraka ny toromarik'i Google. Rehefa nampidirina ity algorithm ity, dia namoaka ity fanambarana manaraka ity i Google:
".ity algorithm ity dia manatsara ny fanatsarana hafa amin'ny ezaka ataontsika hampihenana ny tranonkala ary hampiroborobo ny votoatiny avo lenta. Na dia tsy afaka mamoaka siantifika manokana aza isika satria tsy te hanome ny fomba hanamafisana ny valin'ny fikarohantsika sy hampivelatra ny traikefan'ny mpampiasa, ny toro-hevitra ho an'ny Webmasters dia ny hifantoka amin'ny famoronana tranonkala avo lenta izay mamorona traikefa mpampiasa tsara ary mampiasa fomba fotsy SEO (GOOGLE). "
Nokendren'ny tranonkala mampiasa tetikady mifandraika amin'ny fifandraisana amin'ny laharana ambony amin'ny Google. Ireo mpivarotra an-tserasera sy webmasters izay nahazo jiosy mifandraika amin'ny tranokalany amin'ny fampiasana teknolojia mainty SEO toy ny fividianana rohy na fambolena rohy dia voarara. Rehefa navotsotra ny famoaham-bokan'ny Google Penguin, ny tranonkala izay nanao hetsika hanesorana ny lozisialy tsy misy kalitao dia mety hamerina ny loka. Manome ny fahafahana hanala ny rohy malaky haingana sy maimaim-poana i Google. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny fametrahana fitaovana fifandraisana amin'ny Google tsy hanelingelina. Ireo izay tratran'ny famoaham-bokan'ny Google Penguin dia tsy maintsy niandry ambara-pahatongan'ity algorithm ity indray mandeha indray mba hamerina ny toerany.
Ity algorithm ity dia mbola misy fiantraikany amin'ny fananganana ny tranonkala satria ny kalitao sy ny rohy mifandraika dia ampahany manan-danja ao amin'ny rafitra fizarana Google. Izany no antony mety handoavam-bola anao hametrahana ny teknolojia mainty SEO amin'ny sehatra SEO na manakarama ekipa SEO tsy miankina. Amin'izao fotoana izao, ny fampahalalam-baovaon'ny Penguin dia niverimberina matetika taorian'ny rohy mampiahiahy ary voakasika ny 3,1% amin'ny fangatahana.